China OEM 30639780 sy 30639781 ARMS CONTROL Ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy VOLVO -Z5148 | TANGRUI
Fanamarihana / Tranga
Production / R & D
OEM 30639780 sy 30639781 C ...
Fampiatoana sy familiana Kn ...
Shock lohataona avo lenta ...
OEM 30639780 sy 30639781 ARMS CONTROL Ho an'ny VOLVO -Z5148
NAHOANA IREO ARMS CONTROL no ZAVA-DEHIBE?
Ny fitaovam-piadiana mifehy dia manome fifandraisana sy pivot point eo anelanelan'ny fampiatoana ny fiara sy ny chassis. Mampifamatotra knuckle familiana amin'ny vatan'ny vatana, mifehy ny sandry, ary misy zana-tsipiky ny baolina izay miara-miasa mba hitazonana ny fanarahana kodiarana sy ny toerana misy azy. Ohatra, ny sandry ambany fanaraha-maso dia manampy amin'ny fametrahana ny toerana longitudinal sy lateral an'ny kodiarana raha mbola mihetsika ny fiara.
Ny sandry mifehy dia manohitra ny herin'ny famoahana entana maro, toy ny fanafainganana / fanidiana, fanodinana raha mihodina ary ny lanjan'ilay vatan'ny fiara. Izy ireo koa dia manana ny asan'ny fanampiny amin'ny fitazonana ny fampifanarahana kodiarana mavitrika. Mampihena ny tabataba, ny hatairana ary ny fihozongozona izany raha manome fanoherana ny hetsika fampiatoana tsy ilaina.
Miankina amin'ny fanaingoana fampiatoana (Multi-Link, MacPherson, Double Wishbone), ny sandry fanaraha-maso dia azo apetraka eo anoloana sy eo aoriany aoriana, na amin'ny toerana ambony na ambany.
Amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny fampiatoana ankavia sy ankavanana ny fiara amin'ny bara fanamafisam-peo, ny rohy mpampiorina dia mitazona ny kodiarana amin'ny haavony mitovy ary mampihena ny vatan'ny fiara.
Inona no mahatonga ny sandry mifehy antsika ho lehibe tokoa? Tangrui dia manome ny teknisiana ny sisiny, amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny singa mifehy ny sandry rehetra. Amin'ny salan'isa, ny fametrahana ny sandrinay mifehy dia mitaky fotoana 30% kely kokoa satria efa napetraka mialoha ny tonon-taolana sy ny kirihitra. Ireo injenieranay dia mifantoka amin'ny fanaovana izay hahamora kokoa ny fametrahana sy manangana anay hanomezana fiainana maharitra. Mampiasa ny fanasaziana ny fanandramana maharitra, manamarina ny endrika vaovao rehetra izahay hahazoana antoka fa hahazo fampisehoana azonao itokisana.
Axle eo aloha, havia, ambany VOLVO XC90 [03-11]
Axle eo aloha, ankavanana, ambany VOLVO XC90 [03-11]
Size Fenitra OEM
Material --- Cast vy --- Cast-aluminium --- Cast varahina --- vy mulesaka
Brand Ho an'ny VOLVO
Warranty 3years / 50,000km
Certificate IS016949 / IATF16949
Previous: OEM BS1A-34-350 BS1A-34-300 CONTROL ARMS Ho an'ny Mazda -Z5147
Manaraka: Fitaovam-piadiana fanaraha-maso avo lenta OEM 54500-3S000 Ho an'ny HYUNDAI SONATA-Z5149
Fitaovam-piadiana fanaraha-maso tubular
ARMS CONTROL HO AN'NY TOYOTA-Z5144
OEM TD11-34-300B sy TD11-34-350B ARMS CONTROL ...
Tangrui namboarina namboarina sandry mety ho an'ny ...
Hight Quality Control Arms OEM 54500-3S000 Fo ...
8E0407510A ARMS CONTROL Ho an'ny Volkswagen Passat-Z ...
Fitaovana fanaraha-maso ambony azo ovaina ambony mifanentana amin'ny ...
ANHUI TANGRUI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., Filozofia LTD dia "Ny kariera tsara amin'ny famolavolana, ary ny fahombiazana dia azo amin'ny fisainana". Izahay dia nanolo-tena tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny familiana knuckle, mandray ny teknolojia ho ny fotony.
116 # Fangzheng Road, Zone Wuhu Jiujiang, Faritra fampandrosoana toekarena sy teknolojia
Phone: + 86-553-2590369
Shock Absorber Bolt, Hub misy kodiarana, Shock Absorber fingotra, Knuckle familiana eo aloha, Tyre Ball Joint, Hood Shock Absorber,